Etu ị ga-esi wuo weebụsaịtị mgbe ịzụrụ ngalaba aha? - Ntuziaka Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Etu ị ga-esi wuo weebụsaịtị mgbe ịzụrụ ngalaba aha?
Ụdị ọkwa:Ngalaba / Bochum / Weebụsaịtị
Oge ịgụ ihe:8 nkeji na -agụ
Ọtụtụ nwere ike ịnwe nkwenye na ị ga - ewe onye nrụpụta weebụsaịtị iji wuo weebụsaịtị mana nke bụ eziokwu bụ na n'oge a teknụzụ enwegogo, i nwere ike ime ya site na onwe gị na-enweghị ihe ọ bụla oru ihe ọmụma.
Need chọrọ ezigbo onye na-ewu weebụsaịtị iji wuo weebụsaịtị dị ka mkpa gị si dị. Nzọụkwụ dị mfe. M na-akọwa ntuzi aka zuru oke iji dozie nsogbu gị nke ịmepụta mkpokọta weebụsaịtị.
Mgbe ịzụrụ ngalaba aha, Ikwesiri ikpo okwu nhazi nke mbu. Oghere Bochum na-echekwa ọdịnaya weebụsaịtị gị. Nke abuo, Buildrụ weebụsaịtị, ị chọrọ onye nrụpụta weebụsaịtị. Ikpeazụ, ntakịrị uche nke ihe okike.
Ọnụ ụlọ ọrụ weebụ
Ndị na-ewu Websitelọ Ọrụ Weebụ
Iwuli mkpokọta na ngalaba Aha
Mwube ngalaba yana nnabata
Mana tupu nke ahụ, ị nwere ike ịchọ ịma ego ole ọ ga - ewe iji wuo webusaiti mara mma. Azịza ya bụ kpam kpam na-adabere n'ụdị weebụsaịtị ị chọrọ. Otu obere ụlọ ọrụ azụmahịa na-amalite site na ọnụahịa dị ala karịa $100 kwa afọ na ọ na-aga ọtụtụ puku dollar kwa afọ na oké ọkachamara chọrọ.
Anyị onwe anyị na-agwa ndị ahịa anyị ka ha jiri obere ego bido webụsaịtị ka ị na-eto n’ahịa gị, ị nwere ike itinye atụmatụ dị elu.
Enwere ọtụtụ ndị na-ewu ụlọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ nke ahụ ga - enyere gị aka ịwepụta ebe nrụọrụ weebụ ọkachamara. Lee n'okpuru m depụtara gị nke ọma.
Ndozi Weebụ Dreamhost
Gator nke HostGator
GoDaddy Weebụsaịtị Nrụpụta
Ọtụtụ n'ime ndị na-ewu weebụsaịtị a nwere ihe owuwu iji wuo weebụsaịtị site na ịdọrọ na dobe. Ihe ikpe azu bu igha agha ihe ichoro gi na ihe ichoro gi na ebe enyere ha.
Nwere ike iri uru nke atụmatụ nnwale n'efu ha ma ọ bụrụ na ọ dị gị mma, ị ga-aga n'ihu site na ịnwe atụmatụ ọnụahịa ha kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ..
I kwesịrị idobe uto gị na ihe kacha mkpa, ka oge na-aga– You ga-enwe ike itinye mmelite ndị ọzọ, ọ na-enye gị ohere ị nweta nkwalite atụmatụ ịchọrọ, ọ nwere nkwado ndị ahịa yana obere atụmatụ. Ọ na-enye gị ohere ịkwaga data site na otu ikpo okwu gaa na ọzọ na-enweghị ọnwụ ọ bụla?
N'ime ndị na-ewu weebụsaịtị wepụtara n'elu, anyị onwe anyị na-ahọrọkarị usoro nhazi nke onwe anyị. The WordPress website na-ewu ya bụ emeghe-isi iyi, n'efu, wee bia puku ndebiri ndebiri na ndọtị. Nke ahụ dị ezigbo mma.
Karịrị 41 % nke ndị ọrụ ịntanetị na-eji nyiwe WordPress. Anyị na-akwadebe weebụsaịtị nke ndị ahịa na WordPress. Ọ nwere nnukwu mgbanwe na ọ fọrọ nke nta dakọtara na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Site na echiche SEO, anyị ahụwo ọtụtụ ihe atụ na-akọwa na ọ dịghị onye nwere ike iti WordPress. SEO bu ihe banyere inweta ogo na njin ọchụchọ dika Google Bing wdg. WordPress na-enwekwu mgbanwe. Atụmatụ SEO na-enyere Google na ndị ọzọ aka ịghọta ọdịnaya gị. Ihe ochicho njini ka bu iji gosiputa ọdịnaya gi n’ime uzo ikwere na mbu. Ndị ọzọ karịa nke a, oru teknụzụ SEO dịkwa mkpa. Nwere ike ịchọta ọtụtụ vidiyo vidiyo na ịntanetị na-edozi ajụjụ gị gbasara WordPress.
Iwulite webusaiti na-adi obi uto. Ọ bụrụ na ị na-eche nsogbu ọ bụla ihu mgbe ị na-eke weebụsaịtị ị nwere ike ịga na kọntaktị anyị iji kpọtụrụ site na email.
Ka anyị bido.
Ojiji na-abanyekarị na mmejọ site na ịhọrọ usoro ikpo okwu na-abụghị nke. Ọfọn, ekele na ihu ọma ị bụ ebe a na anyị. WordPress bụ ụdị nke ikpo okwu nke nwere ọtụtụ puku predefined dị iche iche-ebumnuche ndebiri ndebiri. Designs na tinye ons na-enye gị ohere ike gị kpebiri website imewe.
Eeh, WordPress bụ n'efu, ị nwere ike ibudata ya na ukara website. Ugbu a ajụjụ na-ebilite ebe WordPress sitere ma ọ bụrụ na ọ bụ n'efu? Azịza ya bụ na a na-ana gị ụgwọ maka ịzụrụ nke gị nwere ohere nnabata na ngalaba.
Ndị a bụ ụfọdụ onyinye kachasị mma nke Taa ị kwesịrị ile ha anya.
Kasị Mma WordPress Web Hosting Providers
BlueHost Kachasị Mma Maka Bochum Bochum Starter
Lelee onyinye kachasị ọhụrụ
50% gbanyụọ Bochum cPanel na GoDaddy!
Nhọrọ ọnụ ọnụ Hostgator (Free .COM ngalaba & Nweta 50% Gbanyụọ na Bochum)
(Jiri Usoro:- SUNSHINE)
Nhọrọ nnabata Bochum dị ọnụ ala dị ala (Ruo 84% Gbanyụọ atụmatụ Bochum Ekekọrịtara )
(Jiri Usoro:- AKW8KWỌ 8 )
Aha Onu ego ahia: Chekwa na 86% na Ngalaba & Amalite Ijekọ Bochum
Ọ dabara nke ọma, ụbọchị ndị a, Ọrụ nlekọta Bluehost àjà ọtụtụ atụmatụ na a 60% Gbanyụọ ego mgbe ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịgba gị ụgwọ maka atụmatụ ọ bụla. Ọbụghị naanị nke a kamakwa ị ga - enweta ngalaba akwụghị ụgwọ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe efu gị 14 ka 15 dollar kwa afọ.
ị nwere ike ịga na njikọ a iji nweta onyinye dị ugbu a.
Ọ bụghị ụlọ ọrụ ọhụrụ n'ahịa ọ na-ejere ndị ahịa ozi kemgbe 2005. Ewezuga nke a, ma ọ bụrụ na ị na-eche nsogbu ọ bụla ihu na mwube gị na ebe nrụọrụ weebụ na-eche free ịkpọtụrụ anyị. Anyị bụ maka gị mgbe niile ma nwee obi ụtọ inye aka.
Mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Bluehost, ọzọ ị ga-pịa “bido ugbua” gaba iwu ulo oru webusaiti.
Nke a ga - ewetara gị na peeji na - esote na atụmatụ ọnụahịa dị iche. Ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ na-ahọrọ atụmatụ dịka nhazi ha na ụdị mkpa ha. Anyị onwe anyị na-akwado ka ịmalite site na atụmatụ bụ isi. Ọ bụ n'ihi na ị nọ na ọkwa mbụ, ka azụmahịa gị na-agbasawanye na ọkwa ọzọ, ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa na-eleta weebụsaịtị gị, ị ga-aga ịkwalite atụmatụ.
Ọbụlagodi oge m wulite webusaiti maka ndị ahịa m, m na-agwa ha mgbe niile ka ha zụta atụmatụ dị mkpa. Mgbe m na-akwalite weebụsaịtị ha, ha na-amalite inweta ndị ọbịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obe ya 25000 ndị ọbịa kwa ọnwa. Mgbe ahụ, m gbanwere atụmatụ ebuli elu.
Kama, Ọ bụrụ na ị gbakọọ ọnụ ọgụgụ mbido ọnụahịa na atụmatụ dị oke ọnụ, ị na-eche overpriced. N’onwe ya, anyị anaghị akwado gị.
Anyị nwere ọtụtụ ahụmịhe n'ụdị ụdị ọrụ ahụ. Anyị ejirila ihe a niile rụọ ọrụ maka nke ikpeazụ 10 afọ. Anyị na-enye gị ezigbo ndụmọdụ.
Mgbe nke ahụ mechara, ha ga-agwa gị ka ịhọrọ aha ngalaba kwesịrị ekwesị. Lee ị kwesịrị ịrapara na .com. o kwesiri idi ka aha aha gi si deputa ederede ziri ezi. Ka ị na-eto, gị ahịa ma ọ bụ ọrụ mfe amata gị ika na ngalaba aha.
Nzọụkwụ ọzọ ga-ajụ gị ụfọdụ nkọwa dị ka email, aha, aha ikpeazụ, wdg. Na-ejuputa nkọwa, nzọụkwụ ọzọ ị ga-ahụ mgbakwunye ụgwọ nhọrọ dịka nchekwa weebụ, Ngalaba nchedo, ndabere weebụ. Can nwere ike ịzụta ụlọ ọrụ ndị ọzọ mgbe emechara.
Mgbe m malitere websaịtị nke ndị ahịa m, Anaghị m azụta ha ozugbo. Mgbe otu ọnwa ma ọ bụ abụọ gachara mgbe ọdịnaya weebụsaịtị zuru oke, mgbe ahụ m ga-azụta nkwado ndabere na mpaghara na nchekwa atụmatụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị ịkwụ ụgwọ nhọrọ, mgbe ịzụrụ ihe maka ngalaba yana nnabata. Ọrụ ọzọ bụ ịwụnye WordPress na weebụsaịtị gị tupu ịmalite ịmalite ya.
Mgbe ị debanyere akaụntụ gị, Ha ga-enye otu ihe ntinye ngwa ngwa nke ndị na-abụghị teknụzụ. Ndị ọrụ chọrọ ịwụnye weebụsaịtị ha n'onwe ha n'enweghị enyemaka nke mmadụ atọ ọ bụla.
Mgbe ihe nile geme “typeyoursite.com/wp-admin/” na ihe nchọgharị weebụ ị ga-emegharị gaa na peeji nke nbanye.
Tinye nbanye gị nzere ị ga-ahụ WordPress interface.
Nzuzo WordPress na edozi site na predefined gburugburu. Nke mbu abughi ihe mara mma. Nwere ike ịgbanwe ya ngwa ngwa site na ịpị na ọdịdị –>Gburugburu.
Ga-ahụ ụdị nseta ihuenyo yiri nke dị n'okpuru.
Na ịpị na ọhụrụ ị ga-amata 1000+ mara mma WordPress gburugburu. N'ebe a, otu aro bụ ịwụnye isiokwu dịka ọchịchọ ma ọ bụ m kwuru nzube. Nchịkọta isiokwu nke WordPress nwere isiokwu ụlọ ọrụ dị iche iche. Nwere ike iyo ha dị ka ha ewu ewu.
Maka ntuziaka a, A no m ebe a gha a wunye otutu nzube WordPress isiokwu oke osimiri WP. O nwere ndebiri emere. Onwe ya ị nwere ike iwunye ha na otu ịpị. Ma hazie ntọala a dị ka mkpa gị si dị.
Maka ide ederede na weebụsaịtị gị, i nwere ike iji post nakwa dị ka peeji nke eweta. Ozi bụ isi maka ide ọdịnaya blog na oge niile ebe ejirila peeji nke ibe dị ka ịkpọtụrụ anyị, amụma nzuzo, ngọngọ, ulo, wdg.
Iwulite weebụsaịtị mgbe ịzụrụ ngalaba adighi adi mfe dika nke mbu. N'oge a, ọtụtụ ndị na-ewu ụlọ ọrụ na-ewu ewu yana ndokwa iji hazie ma mejuputa weebụsaịtị site na ịdọrọ na dobe. Akụkụ kachasị mkpa bụ mgbanwe, ndakọrịta na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na nnukwu mgbanwe. Ewezuga nke a, ọ nwere ọtụtụ vidiyo na-enye aka iji dozie ajụjụ ndị ahụ n'onwe anyị. Anyị akọwapụtala nhọrọ kachasị mma ga - ejigide ogologo oge ma nwee ihe niile ịchọrọ.
Ihe ndị ọzọ na-agụ?
Ego ole ka ị ga - enweta site na WordPress Blog
O siri ike inweta ego na mgbakwunye mgbakwunye?
Ọka ịde blọgụ na 10+ Afọ Ahụmịhe. Ebe m na -arụ ọrụ bụ WordPress, SEO, Mee ego ịde blọgụ, Mgbakwunye ahịa. Ọ masịrị m ịnụ ajụjụ gị. Kekọrịta echiche gị na ngalaba nkọwa.
Nke gara agaMgbe ịzụrụ ngalaba na GoDaddy? You Nwere ya
Ọzọ PostOtu esi emepụta webụsaịtị blọgụ gị
Ị nwekwara ike amasị
Otu esi emepụta saịtị WordPress na-enweghị Bochum?
Ọ bụrụ na m zụta ngalaba site na GoDaddy, eme ka m nọrọ n'ụlọ ha?
You Chọrọ ngalaba Aha maka Blog?
Zụrụ Onyinye Ọhụrụ Site na Anyị
Onye otu Damanpreet Singh dere ya
Nweta ego n'ịntanetị
Daalụ maka nleta gị
Ga -emepe na taabụ ọhụrụ
Nwebiisinka 2021 - nkwarụ.com- Mụta ịde blọgụ ọkachamara. Nkpughe: Nke a nwere ike ịnwe njikọ njikọ, nke pụtara na anyị nwere ike nweta ọrụ ma ọ bụrụ na ị pịa njikọ wee zụta ihe anyị tụrụ aro ya. Gụkwuo gbasara mkpughe Mgbakwunye ebe a.